"Filmoota Afaan Oromoo Ukkaamfamee Hafuu Hin Qabuu" - Gammadaa Olaanaatiin
Beeksisaa Filmii Raawwiif kan qophaa’e ture
Filmii Raawwii Ukkaamfamee Hafuu Hin Qabuu
Filmii Raawwii jedhamu bara 2008 haa hojjetamuyyuu namoota hedduu birattii kan hin ilaalamne ta’usaa diqisiifatoota Artii fi Filmii Afaan Oromoo komiisaani dhiheessan. Bara 2008 hojjetamee agarsiisaaf kan oole yoo ta’u, mana agarsiisa (sinimaa) Agonaa, Adaamaa fi Yuunivarsitilee Oromiyaa keessatti agarsiifamuuf yaalamee ture. Ta’us garuu, akka yaadame sanattii milkaa’u hin dandeenye. Biyya Hambaa keessaatti ammo, Awuusteraaliyaatti agarsiifamuu danda’eera.
Erga yeroo sanaati bakka Agarsiisaa Mijataa fi Haala Mijataa Aartiin Oromoo dhabee fi hubannoon hawaasaa gad aanaa tahuun hanga ammaa waggoota 8f ukkamamee tahaa tureera. Amma garuu Giddu galli Aadaa Oromoo filmiwwan tutturaan kannen akka WAADAAfa torbaan darbe agarsiifaman dabalatee akka ilaalaman waan jajjabeessu dha.
Warren filmii Raawwii kana hojjetan Kannen akka Obbo. Galatasaa Nagarii, Dr. Darajee Gerefee Tulluu fi Obbo. Tesgayee Dinqaa faa itti yaaduun yeroo dhihootti ummata dheebuu aartii Oromoo qabuuf akka dhiyeesitan waamicha dabarsa!
Dabalataanis Filmiin ‪Hadha’a jedhamuus barreessaa Mulgeetaan piroodaakshinii‪ ‎SIFSIN‬ dhaan hojjatame waggoota saddet dura agarsiifamee ture achumaan badeera waa’ee isaa ammoo itti deebina. Waamichi kunii garuu isaanifis ni hojjeta. Filmiin Afaan Oromoo kanneen hojjetamee fi kanneen hojjetamuuf karoorfame ukkaamfamee hafuu hin qabu.
Filmii Raawwii xiqqoo asii gadii kan isiniif maxxanfamee daawwadhaa!!